Wararka - ULLER
Dhamaan Qeybaha Entretenimiento Gente Aqoonta iyo Aqoonta Isbeddellada Safarka iyo Goobaha
In kasta oo sanadkan 2020 wax xoogaa aan macquul ahayn, laga bilaabo Uller® waxaan dooneynay inaan sii wadno bixinta xorriyadeena iyo ciyaartooydeena tayada ugu sareysa ee suurtagalka ah si qibrada isboorti marwalba ugu fiicnaato, wax kastoo dhaca Waxaan kuu sheegi doonaa alaabooyinka noogu jeclaa kuwa xamuulka keena!
Dhacdooyinka isboorti ee ugu wanaagsan ayaa soo laabtay 2021!
Ciyaaraha feejignaanta! Ku dhacdooyinka isboortiga inaad sugeysay waxay horey u hayeen taariikhdooda dabaaldega sanadka 2021. Miyaad horeba u qabatay iyaga? Haa, sanad ka buuxo isboorti iyo tacabir ayaa soo socota! Bal u fiirso liiska dhacdooyinka horay u aasaasay borotokolkooda cusub iyo taariikhda kalandarka.
Shaki la'aan dhamaanteen waxaan cod dheer ku dhahnaa: GUUL 2020! Runti waa sanad xagjir ah ... waxaan fahansanahay in sanadkaan runtii uu ahaa mid adag in la fahmo, oo ay adagtahay in la sharaxo sidoo kalena ay adagtahay in laga adkaado, ... LAAKIIN AAN SAMUUR AHAYN Waxaan si adag u aaminsanahay inaysan jirin wax aan macquul aheyn xoreeyayaasha qalbiga, kuwa jecel barafka runta ah, kuwa edbinta tacaburka iyo waxqabadka ...
Xaqiiqdii waxay noqon doontaa hadiyadda ugu fiican! Muraayadaha muraayadaha indhaha ee ku habboon ragga iyo dumarka labadaba waxayna si fiican ula jaan qaadaan wejiga wajiga si ay u yeeshaan dhammaan awoodda suurtagalka ah ee edbinta isboortiga dalbaneyso. Ka dooro isku-dhafka midabada iyo qaababka kala duwan Qalabka ugu fiican ee waxqabadka!
Laga soo bilaabo Uller® waxaan ka abuuraynaa waji baraf ee loogu talagalay barafka iyo barafka loogu talagalay iyo kuwa xayeysiinta ah. Waan ognahay in buuraha, shakhsiyadda iyo qaabku ay yihiin wax aad muhiim ugu ah ciyaartoydeena. Sii wad akhriska oo soo ogow midka kuugu habboon adiga !!
Waxaan ku faraxsanahay inaan ka helno booqasho qaas ah Santander gacmaha Katia Martínez, xirfadlaha xorriyadda, barafka iyo macallinka sare, iyo wixii ka sarreeya, tusaale cad oo ah ruux xor ah! Shaqaalaheena Hindida ah ma joojinayo inay la koraan ciyaartooy waaweyn.
Ururintayada ULLER SNOWDRIFT® muraayadaha indhaha barafka Waxaa lagu sameeyay teknolojiyada ugu casrisan ee indhaha adduunka! AnigaWaxay ka mid yihiin nidaamka isweydaarsiga muraayadaha indhaha. Ma taqaan tiknoolajiyadeena? Halkan ka baro!
Barafka ama barafka lagu ciyaaro ayaan ciyaar aheyn. Kuwani waa isboorti xad-dhaaf ah oo u baahan diyaarin iyo xaalado ku habboon. Waxa ugu muhiimsan ayaa ah ku dar tayada ugu fiican qalabka aad sidato oo ay ku jiraan qaar muraayadaha indhaha.
Taageerayaasha ayaa diyaarsada kuwooda Muraayadaha barafka si buuxda ugu raaxaystaan xilliga barafka Halkan guji oo soo hel kuwa ugu yaabka badan Yurub! Miyaad horeyba u ogeyd midka iyaga ka mid ah ee aad ugu jeceshahay?
Labada xirfadley iyo kuwa bilowga ahba waa inay indhahooda ku ilaashadaan muraayadaha indhaha Shaki la'aan waxaa la joogaa waqtigii dib loo cusbooneysiin lahaa kanaga xilligan. Sii wad akhriska oo aad ogaatid faa'iidooyinka ay leedahay xirashada kuwa ugu fiican muraayadaha barafka 20-21!
Goobaha barafka ee ugufiican meesha lagu xirto muraayadaha indhaha
Miyaad horeba u hubsatay midka noqon doona goobta barafka aad ugu jeceshahay? Mise maxaad isku dayi weyday dhammaan kuwan waaweyn ee aan kugula talineyno? Ka bax ajandaha oo qorshee safarkaaga barafka. Kumaan kun oo tacabur ah, boodbooyin ah, pirouettes iyo faracyo ayaa kugu sugaya saldhigyada kala duwan ee Jasiiradda. Ha iloobin inaad soo qaadato maaskaro barafka!
Diyaarso muraayadaha indhaha barafka Xilliyadu dib ayey u furmayaan!
The xilliga barafka 2020/2021 ayaa bilaabmi doonta! Goobaha barafka lagu ciyaaro waxay soo saaraan borotokool gaar ah usbuucyo si ay awood ugu yeeshaan inay si nabad ah dib ugu furaan ... iyo kanaga muraayadaha barafka waxay noqon doonaan cunsur lagama maarmaan u ah yareynta halista faafitaanka sanadkan.
Haddii aad wali ka fikireyso inaad bilowdo isboortiga jiilaalka, kama daahin inaad dib u eegto waxa aad doorbideyso markaad dooraneyso meesha aad ka bilaabeysid, dooro qaabka kuugu habboon adiga oo fahmo haddii ay tahay inaad iibsato midkaaga Muraayadaha indhaha ama kanaga muraayadaha barafka.Halkan wax yar ka ogow labada isboorti!
El xorriyadda waa qaabka snowboard taas oo aad ku sameysid gebi ahaanba-off-piste, barafka bikradda ah, oo leh wanaag muraayadaha barafka, anagoo iska ilaalinayna dhamaan dhagxaanta iyo carqaladaha inagu soo food leh. Waqtigan xaadirka ah waxaa jira tijaabooyin looxa barafka loogu talagalay oo xur ah iyo tartamo lagu maro jidadka la soo jiiday.